Perth waa magaalo oo kuyaalo dalka Australia. Perth waana caasimada gobolka Galbeed Australia. Perth (/ pɜːrθ / (ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya)) waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee gobolka Australiya ee Western Australia. Waa magaalada afaraad ee ugu badan Australia, oo leh dad ka kooban 2,022,044 oo ku nool Caasimadda Greater  Perth waa qayb ka mid ah Qaybta Koonfur Galbeed ee Galbeedka Australia, oo leh badi magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Swan Coastal Plain, cirifka dhaadheer ee u dhaxeeya Badweynta Hindiya iyo Cajiibka Jilicsan. Meelaha ugu horeeyay ee degay waxay ku jireen wabiga Swan ee Guildford, iyada oo magaalada ganacsiga dhexe ee magaalada iyo dekedda (Fremantle) labadoodaba ay aasaaseen hooseeyaha. [[File:Cottesloe Beach, Perth, Western Australia (4431664542).jpg|left|thumb|[[Cottesloe, Western Australia|Cottesloe Beach]]]] Perth waxaa aasaasay Captain James Stirling sanadkii 1829-kii, oo ah xarunta maamulka ee xaafadda Swan River Colony. Waxay heshay xaalada magaalooyinka (oo hadda ku taala magaalada Perth ee 1856), waxaana loo dallacsiiyay xilka Mastarjoogga ee 1929-kii.  Magaaladu waxaa lagu magacaabaa Perth, Scotland, sababtoo ah saameynta Sir George Murray, kadibna Xubin Baarlamaanka ah ee Perthshire iyo Xoghayaha Dawladda ee Dagaalka iyo Goobaha Kacdoonka. Dadwaynaha magaalada ayaa si aad ah u kordhay ka dib markii ay ka soo baxeen gumaadka dahabka ee reer galbeedka Australiya dhamaadkii qarnigii 19-aad. Intii lagu guda jiray Australia ee Dagaalkii Dunida II, Fremantle wuxuu u adeegay saldhigga kalluumeysiga ee ka shaqeynaya Tiyaatarka Baasifigga, iyo Ciidamada Badda ee Mareykanka ee Markabka Catalina waxay ku saleysneyd Matilda Bay.  Qaxoontiga qaxoontiga ah ka dib dagaallada, badanaa laga soo qaatay Ingiriiska, Giriigga, Talyaaniga iyo Yugoslavia, ayaa horseeday korodhka dadweynaha. Tani waxa soo raacay dhaqdhaqaaq dhaqaale oo ka socda dhaqdhaqaaqyo badan oo macdan qodaya 20-ka iyo qarniyadii 21aad ee arkay Perth oo noqda xarunta gobolka ee dhowr hawl-gallo waaweyn oo ku yaalla gobolka.
Iyada oo qayb ka ah kaalinta Perth ee caasimadda Western Australia, Baarlamaanka gobolka iyo Maxkamadda Sare waxay ku yaalaan magaalada gudaheeda, sida waa Aqalka Hoose, degenaanshaha Guddoomiyaha Gobolka Western Australia. Perth ayaa ku jirta kaalinta toddobaad ee Cutubka Bishii Agoosto 2016 ee Magaalooyinka ugu nool ee lagu noolaan karo,  waxaana lagu qeexay Shabakada Globalization iyo Network Cities Research 2010-ka oo ah magaalada Beta aduunka. Magaaladu waxay martigelisay 1962 Cayaaraha Commonwealth.
Perth waxay u qaybsantaa 30 degmo oo maxalli ah iyo 250 degmo, oo ka soo jeeda laba dhagax oo waqooyi ku yaalla Singleton ee koonfurta, iyo bariga qorraxda ah. Ka baxsan CBD ee ugu muhiimsan, xarumaha muhiimka ah ee magaalada Perth waxaa ka mid ah Fremantle iyo Joondalup. Badankood ayaa markii hore loo asaasay degsiimooyin kala duwan waxayna haystaan ​​aqoonsi goonni ah ka dib markii lagu qaxay meelihii weynaa ee weynaa. Mandurah, oo ah magaalada labaad ee labaad ee ugu wayn Galbeedka Australia, ayaa sanadihii ugu dambeeyay sameeyay isku dhaf ah Perth xeebta xeebta, inkasta oo ujeedooyin badan ay weli tahay magaalo gaar ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Perth&oldid=180573"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Sebteembar 2018, marka ee eheed 10:54.